DrMay ThantSyn	2019-09-03T14:56:03+00:00	September 3rd, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
သင့်ကလေး အာရုံကြောအားနည်းနေမှန်း ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ အမြဲလက်လက်ထအောင်ဆော့နေတဲ့..ဆော့ဖို့လည်း လိုအပ်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် အာရုံကြောတွေ အမြဲအားကောင်းနေဖို့လိုပါတယ်။ အာရုံကြော အားနည်း၊ထိခိုက်၊ ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။မွေးရာပါ ခန္ဓာကိုယ်ပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို အာဟာရချို့တဲ့လို့၊ ဒါမှမဟုတ် မတော်တဆမှုတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဆက်မပြတ်ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ဆောင်နေရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာမျိုးတွေ ပေါ်လာရင်တော့ ကလေးမှာ အာရုံကြောပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပြီလို့ ယူဆရနိုင်ပါတယ်။ 🔘ထုံခြင်း ခြေတွေ လက်တွေပဲ ထုံနိုင်သလို တချို့နေရာတစ်ခုတည်းမှာပဲ ကွက်ပြီးထုံနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ခြေအိတ်လက်အိတ်စွတ်ထားသလိုမျိုး ခြေထိပ် လက်ထိပ်တွေ ထုံတယ် ထိလို့ထိမှန်းမသိဖြစ်ဖြစ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ အာရုံကြောပြဿနာ သိသိသာသာ ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ 🔘ကျဉ်ခြင်း အချိန်ကြာကြာ ဖိမိထားလို့ ကျဉ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ မကြာခဏ ကျဉ် နေတတ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့် လက်ကျဉ်တာ အဖြစ်များပါတယ်။ 🔘နာခြင်း
DrMay ThantSyn	2019-09-01T23:18:57+00:00	September 1st, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
သင့်ကလေး အာရုံကြောအားကောင်းစေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းများ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လိုအင်တွေက သိပ်မများလှပေမဲ့ လူကြီးတွေဖြည့်ဆည်းပေးရမဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကတော့ များလှပါတယ်။နံပါတ်တစ်လိုအပ်ချက်ကတော့ ကျန်းမာရေးပါ။ကျန်းမာရေးအတွက် လိုက်နာရမဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးထဲက ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲ မေးရင်တော့ ဒီလိုဖြေရပါလိမ့်မယ်။ 🔘ကစားပါ အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီး အန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်သည့် ကစားနည်းတိုင်းကို ကလေးကို ပေးဆော့ပါ။ရေကူး၊ စက်ဘီးစီး၊ ဘောလုံးကန် စတဲ့ သွက်လက်တက်ကြွစွာ ဆော့ကစားရတဲ့ ကစားနည်းတစ်ခုခုကို ပုံမှန်ကစားခိုင်းဖို့လိုအပ်သလို Chess၊ ကျားထိုး၊ Scrabble၊ စတဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည်တိုးတက်စေမဲ့ အငြိမ် ကစားနည်းတွေလည်း ပေးဆော့ပါ။ 🔘ဖုန်း/TV/ဂိမ်း လျှော့ပါ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ အကြီးဆုံးပြဿနာပါ။ဖုန်း၊TV နဲ့ အချိန်ကုန်နေတဲ့ ကလေးတွေမှာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရည်ကျလာတာ၊ အညောင်းမိပြီး ချိနဲ့လာတာ၊ ဖန်သားပြင်တွေကထွက်တဲ့ Blue
DrMay ThantSyn	2019-08-30T15:02:59+00:00	August 30th, 2019|Categories: All Articles, ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
မီးဖွားပြီးနောက်ဖြူဖျော့ပြီး အမောဖောက်ခြင်း သားသားမီးမီးလေးတွေမွေးပြီဆိုတာနဲ့ မေမေတို့ခမျာ တစ်နေ့နေ့ဒီကလေးနဲ့ပဲ ချာလည်တွေရိုက်၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျ ဂရုမစိုက်ဖြစ်နဲ့။အဲ့လိုမိမိကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်ဖြစ်တော့ မဖြစ်သင့်တဲ့ဝေဒနာတွေ၊နာမကျန်းမှုတွေဖြစ်ပြီး လူပင်ပန်းရတတ်ပါတယ်။ဒီအထဲကမှ အဖြစ်များလေ့ရှိတဲ့ မီးဖွားပြီးသွေးအားနည်းတတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုသတိထားရအောင်ပြောပြချင်ပါတယ်။ မီးဖွားပြီးနောက်ပိုင်း ဖြူဖျော့အားနည်းပြီးအမောဖောက်တာဘာကြောင့်လဲ??? မီးဖွားပြီးနောက်သွေးအားနည်းရောဂါခံစားရတဲ့အခါမှာ ဖြူဖျော့အားနည်းတတ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကနေမှ ပိုဆိုးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ နှလုံးအားနည်း၍အမောဖောက်ခြင်းကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ရောဂါပြင်းထန်လွန်းပါက အသက်သေဆုံးသည်အထိဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရသလဲ??? အောက်ပါအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်- ၁)သံဓါတ်ပြည့်ဝစွာ စားသုံးမှုမရှိခြင်း။ -ကိုယ်ဝန်မရှိစဉ်အချိန်နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်အချိန်မှာ သံဓါတ်ကိုပြည့်ဝစွာမစားသုံးပါက မီးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာသွေးအားနည်းရောဂါကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ -ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တွင် တစ်ရက်ကို သံဓါတ်၎.၄မီလီဂရမ်လိုအပ်ပါတယ်။ -ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ သံဓါတ်အားဆေးကိုမဖြစ်မနေသောက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ -အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ကလေးယူတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ သံဓါတ်အားဆေးကိုစတင်သောက်သုံးကြပါတယ်။ ၂)ကလေးမွေးဖွားစဉ်သွေးဆုံးရှုံးမှုများခြင်းကြောင့်သွေးအားနည်းရခြင်း။ -မီးဖွားစဉ်အချိန်မှာ ပျမ်းမျှအနေနဲ့သွေး ၅၀၀မီလီလီတာလောက်ဆုံးရှုံးရလေ့ရှိပါတယ်။ -ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဟာကို သံဓါတ်အားဆေး၊အစာအာဟာရနဲ့ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၃)အခြားအူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ။ -သံဓါတ်စုပ်ယူမှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သော အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများရှိနေခြင်းကလဲ သွေးအားနည်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ မီးဖွားပြီးနောက် ဖြူဖျော့အမောဖောက်ခြင်းမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ??? ကလေးမွေးဖွားပြီး သွေးအားနည်းခြင်း၊အမောဖောက်ခြင်းမဖြစ်ရလေအောင် ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်၊ဆောင်နေစဉ်နဲ့မီးဖွားပြီးအချိန်တွေမှာပါ သံဓါတ်ပေါကြွယ်ဝသောအစားအစာများစားသုံးခြင်း၊သံဓါတ်အားဖြည့်ဆေးများသောက်သုံးခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ကိ်ုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုတာနဲ့ သံဓါတ်အားဆေး တစ်ရက်တစ်ပြား(၅မီလီဂရမ်)ကို
DrMay ThantSyn	2019-08-23T15:19:53+00:00	August 23rd, 2019|Categories: All Articles, ကလေး ကျန်းမာရေး, မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာရေး|
ဒိုင်ပါလောင်ရသည့် အကြောင်းရင်းများ ဒီခေတ်မှာတော့ သေးခံဒိုင်ပါနဲ့ ကင်းတဲ့ ကလေးဆိုတာ ခပ်ရှားရှား။ ဒိုင်ပါကြောင့် မိဘတွေအတွက် လျှော်ရဖွတ်ရ အတော်သက်သာသွားပေမဲ့ သတိမထားဘဲ ပေါ့ပေါ့ဆဆသုံးမိရင်တော့ ကလေးတွေအတွက် ဒိုင်ပါလောင် အနာဖြစ် ပိုးဝင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိတာမို့ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ 🎯ဘာကြောင့် ဒိုင်ပါလောင်ကြလဲ ?? ▪ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ ဒိုင်ပါတစ်ခုရဲ့ ခံနိုင်ရည် အတိုင်းအတာကျော်ပြီး အချိန်ကြာကြာဝတ်ထားမိရင် ဖြစ်ပါတယ်။ ▪ ဒိုင်ပါကို ကြာကြာဝတ်ထားမိတဲ့ အခါ အချိန်ကြာမြင့်စွာစိုစွတ်မှု၊ ပွတ်တိုက်မှုနဲ့ ဆီးကနေထွက်လာတဲ့ အမိုးနီးယားဓာတ်တွေက ကလေးရဲ့ နုနယ်လှတဲ့ အသားအရေကို ပျက်စီးထိခိုက်စေပါတယ်။ နေရခက်ယားယံခြင်းကနေ နောက်ဆက်တွဲ ဒိုင်ပါလောင်တယ်ဆိုတဲ့ အဆင့်အထိ ဂရုမစိုက်မိရင် ဆက်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ▪ဒိုင်ပါကို သိပ်ကျပ်ကျပ်ဝတ်မိတဲ့